गाउँपालिकाको दश लाख बजेट विराजको ‘साङ्लो’मा, लालपूर्जा हुँदा-हुँदै पनि सुकुम्बासी ! (भिडियो) « News24 : Premium News Channel
गाउँपालिकाको दश लाख बजेट विराजको ‘साङ्लो’मा, लालपूर्जा हुँदा-हुँदै पनि सुकुम्बासी ! (भिडियो)
काठमाडौं । न्युज २४ टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम ‘सीधाकुरा जनतासँग’को आज ३९४ औं एपिसोड हो । कार्यक्रमको आजको एपिसोडमा पनि विशेष रिपोर्टहरु प्रस्तुत गरिएको छ । साथै, विभिन्न विषयमा सरोकारवालाहरुसँग प्रत्यक्ष कुराकानी पनि गरिएको छ ।
१. विराजको ‘साङ्लो’का लागि गाउँपालिकाकोे दश लाख– हिरोइनको बुबाको भूमिकामा गाउँपालिका अध्यक्ष !
डोटी । डोटीको जोरायल गाँउपालिकाले आफ्नो विकास बजेटबाट फिल्म निर्माणमा खर्च गर्ने भएको छ । गाँउपालिकाको कार्यपालिकाको बैठकले अभिनेता विराज भट्टले निर्माण गर्न लागेका फिल्म ‘साङ्लो’का लागि १० लाख छुट्याएको छ । गाँउमै सुटिङ हुन लागेकाले पर्यटन प्रर्वद्धन हुने भन्दै गाँउपालिकाले यस्तो निर्णय गरेको गाउँपालिका अध्यक्षको तर्क छ । तर, स्थानीयहरुले भने विकासका काम छाडेर आफ्नो फिल्म खेल्ने रहर पूरा गर्न फिल्मलाई १० लाख दिएको आरोप लगाइरहेका छन् ।
२. सुनवलका स्थानीयबासी–लालपूर्जा भएर पनि सुकुम्बासी बन्न बाध्य
नवलपरासी । पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरापालिकाका स्थानीयको हात हातमा हकभोग गरेको जग्गाको सरकारलाई नियम अनुसार राजश्व तिरेर लिएको लालपुर्जा छ । तर, मालपोत कार्यालयले मन्त्रीपरिषदकै निर्णय नमान्दा यो केवल कागजको खोस्टो मात्रै बनेको छ । २०५५ साल र २०६६ सालमा बनेका सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगबाट अव्यवस्थित बसोबास गरेका स्थानीयको जग्गा नाप नक्साङ्कन गरी स्थानीयलाई हकभोग गरिरहेको जग्गाको लालपूर्जा दिइएको थियो ।